( child - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: ( child (Engels - Burmees)
စာရဲမူကား မြုံသော မိန်းမဖြစ်၍ သားသမီးမရှိ။
နွားကိုသတ်၍ သူငယ်ကို ဧလိထံသို့ သွင်းလျက်၊ ဟန္နက၊ ကျွန်မ၏သခင်၊-
မိဘမရှိသောသူငယ်နှင့် မုတ်ဆိုးမကို သင်တို့သည် မနှောင့်ရှက်ရ။
Last week, your eldest child started coughing through the night.
သင်သည် ပိတ်ပါးရေစစ်ဖြင့် စစ်သော်လည်း သိပ်များများ ကောင်းမလာချေ။
A Syrian mother trying to swim to safety carrying her toddler child.
ယင်းဓာတ်ပုံသည် အင်တာနက် ပေါ်တွင် ပြန့်နှုံသွားသည်။
အကြင်သူသည် ငါ့မျက်နှာကိုထောက်၍ ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစုံတယောက်ကို လက်ခံ၏၊ ထိုသူ သည် ငါ့ကိုပင်လက်ခံ၏။
ဒိုက်ပါများ လဲပေးပြီးနောက် သို့မဟုတ် အိမ်သာသုံးထားသည့် ကလေးငယ်ကို သန့်ရှင်းပေးပြီးနောက်။
She credits her success to the hardships through which she went asachild.
သူမ၏ အောင်မြင်မှုတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘ၀က ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သူမပြောလေ့ရှိသည်။
ရှောလု၏သမီးမိခါလသည် တသက်လုံးသားကို မဘွားမမြင်ရ။
ဝမ်းလျောခြင်းနှင့် နမိုးနီးယားနှစ်ခုပေါင်း တို့ကြောင့် နှစ်စဉ် ကလေး 3.5 သန်း နီးပါး သေဆုံးသည်။
ဤမိန်းမသည် ညဉ့်အခါ မိမိသားငယ်ကိုဖိ၍ အိပ်မိသောကြောင့် သားငယ်သေပါ၏။
ပဋိသန္ဓေရှိသဖြင့် ဒါဝိတ်ထံသို့လူကိုစေလွှတ်၍၊ကျွန်မ၌ ပဋိသန္ဓေရှိပါ၏ဟု လျှောက်စေသော်၊
ထိုမိန်းမသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍ ဘွားအံ့သော ဝေဒနာပြင်းသောကြောင့် အော်ဟစ်လေ၏။
ဣသရေလသည် အသက်ငယ်သောအခါ ငါ သည် ချစ်၍ ငါ့သားကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ခေါ်ခဲ့ပြီ။
morsbestendig (Nederlands>Engels)entrare (Italiaans>Duits)mangostões (Portugees>Engels)johto (Fins>Roemeens)screeningtests (Duits>Russisch)perintöosan (Fins>Roemeens)razgoni (Kroatisch>Italiaans)balya vivaha prabhadha (Engels>Kannada)hindi umaayon sa plano (Tagalog>Engels)dehogynem (Hongaars>Vietnamees)urineblaastumoren (Nederlands>Spaans)nakauwi na (Tagalog>Cebuano)aheval lekhan on bus aksmat (Hindi>Gujarati)evolución (Spaans>Fins)पैर के तलवे पर तिल (Hindi>Engels)pustakada mahatva kannada (Engels>Kannada)implementazione (Italiaans>Spaans)apologies for the inconvenience caused (Engels>Afrikaans)розу (Russisch>Engels)naproxeno (Spaans>Engels)perintah (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))ut eatis (Latijn>Italiaans)in die lig van (Afrikaans>Engels)kitni baar kiya hai (Hindi>Engels)pasa egun on bat (Baskisch>Frans)